လွတ်လပ်ရေးနေ့ အတွေး | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
I'm really touched by your post. I felt sorry to read about Ba Ba U Tin Moe's most desperate time which coincided with Independence day. I wish that we all could have the happy moments instead of sadness onagreat day like this. :(
လွတ်လပ်ရေးနေ့က အာဇာနည်နေ့တို့ ပြည်ထောင်စုနေ့တို့လို ကျောင်းဖွင့်နေတဲ့ ရာသီမှာ မဟုတ်ပဲ ဒုတိယအစမ်းဖြေပြီး ကျောင်းရည်ရှည် ပိတ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တော့ ကျောင်းမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပွဲတွေ မလုပ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်က လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ လွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရကို သိကြလို့ မဟုတ်ဘဲ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အားကစားပွဲတွေ လုပ်တာကြည့်ပြီး ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ အပြစ်မရှိပဲ လွတ်လပ်မှုတွေ မတရား ဆုံးရှုံးခံနေရသူတွေ အများကြီး ရှိတာကိုတော့ တော်တော်ကြီးမှ သိရပါတယ်။ အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ စစ်အုပ်စု တစုစာအတွက်ပဲ ဖြစ်နေပြီး ကျန်တဲ့သူတွေ အကုန်လုံးအတွက် ကြာလေ လွတ်လပ်ရေး အနှစ်သာရကင်းမဲ့လေ ဖြစ်နေတာကို တွေးပြီး ယူကျုံးမရ ဖြစ်မိတယ်။
ရုံးမှာ form တစ်ခုဖြည့်နေရင်း date တပ်လိုက်တော့ january 04 ဆိုတော့မှ ဟာဒီနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပါလားပေါ့။ ပို့စ် တပုဒ်လောက် အမှတ်တရရေးမယ်ဆိုပြီး ပူးတေက ပို့စ်မရေးခင် အရင်ဘယ်သူတွေရေးထာသေးလဲလို့ ရှာမိတာ။ မမပို့စ်ကို သွားတွေ့တာ ရင်ထဲကိုနင့်သွားတာပဲ...
ချိုသင်းရေ....ဘဘ လက်ကြိုးတုတ်ရက်နဲ့ ဆူးလေ ဘုရားဖူးတဲ့ နေရာ၊ ဒီနေ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပေမဲ့ အချုပ်အနှောင်ခံ နေရတဲ့နေရာ၊ ချိုသင်း ဘဘရဲ့ ကိုယ်လုံးလုံး ဝဝ ကြီးကို ဖက်ပြီး ငိုတဲ့နေရာ တွေမှာ တို့လဲမျက်ရည်လည်ရတယ်၊ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ခုပဲ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စကားလေးကို side bar မှာ ကူးထည့် နေတာ...။ ဘယ်တော့များမှ တို့ပြည်သူတွေ အငိုရပ် နိူင်ကြမှာတဲ့လဲ....ရင်ထဲ မကောင်းဘူး ချိုသင်းရယ်....။
ဆရာကြီးပြောတဲ့ စကား "အော်..မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ငါ မလွတ်လပ်ပါလား လို့..." စိတ်ထိခိုက်ဖို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့ လွတ်လပ်တိုးတက်သင့်ပါရဲ့နဲ့ ပြည်သူတွေ အခက်အခဲတွေကြားမှ ရုန်းကန်နေရတုန်းပဲလေ...
အမရေ ... လူသူမသိ တိတ်တဆိတ်ကျခဲ့ကြတဲ့ မျက်ရည်စက်ပေါင်းများစွာ ခန်းခြောက်စေချင်ပါပြီ။
အားလုံး လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကိုသာ ဆုတောင်းပါတယ်။
"အော်..မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ငါ မလွတ်လပ်ပါလား တဲ့ ” စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ် မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးလွတ်လတ်ကြပါစေ ..
ဆရာကြီးကိုရော ခိုကိုးရာမဲ့ငှက်ကလေးတွေလို ဖြစ်သွားရတဲ့ ချိူသင်းတို့ မောင်နှမတွေကိုရော စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.
တွက် စတေးရတာတွေက များလိုက်တာ..
ဘယ်တော့ရပ်ပါမယ်မသိ.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေး ဆက်လုပ်နေဦးမှာပါ လွတ်လပ်ရေးကို မြတ်နိူးခဲ့သူများအတွက်..
ဘယ်သူမှ မလွတ်လပ်သေးပါဘူး ချိုသင်းရယ်
ခုနောက်ပိုင်း သူတို့လဲ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကို
တို့တွေ ငယ်ငယ် ကလို
သူတို့ ကိုယ်တိုင်က သိနေလို့နေမှာပေါ့
လွတ်လပ်ရေး ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းပြရင် သူတို့ ဖိနှိပ်တာတွေကို ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဘွင်းဘွင်းကြီး ချက်ချင်း နားလည် သဘောပေါက်မှာကြောက်တာနဲ့ ပဲ
လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကို တိုးတိုးလေး အိနြေ္ဒ မပျက်ရုံ လုပ်လာခဲ့တာ ကြာပါပေါ့လား
အရင်တုန်းက လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ အာဇာနည်နေ့တွေဆိုရင်
အိမ်တိုင်း နိုင်ငံတော်အလံထောင်ပြီး ဂုဏ်ပြုကြတာတွေ့ရတယ်။ ဒီနေ့တော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လမ်းတွေ၊ အိမ်တွေလိုက်ကြည့်မိပါတယ်။ အလံထောင်ထားတဲ့အိမ်တွေ မတွေ့မိသလောက်ပဲ.. မလွတ်လပ်တဲ့ဘဝမှာ လူတွေလည်း အလံထောင်ဖို့ မေ့ကုန်ကြပြီ ထင်ပါတယ်..
လွတ်လပ်ရေးနေ့တဲ့လား အမရေ... ငယ်ငယ်တုန်းက လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုရင် တကယ့်ကို ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့ပါ။ အခုဆိုရင် ဒါတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ ကျော်ပြီပေ့ါ..
"အော်..မြန်မာပြည်ကြီး လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ငါ မလွတ်လပ်ပါလား လို့..." ဒီစကားလေး မှတ်သားသွားတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့ တဲ့လား ။ ဒီနေ့ ဗမာပြည်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကို ခေါ်ပြီးပြချင်ပါလိုက်တာ ။ ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေ ပြောမလဲ ဆိုတာလဲ သိချင်လိုက်တာ ...
ရောက်ပါတယ် အစ်မရေ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွေး ကို ဖတ်သွားပါတယ်။ မျက်မမြင် ပုဏ္ဏားလေးယောက် အကြောင်း လာဖတ်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်။
အပေါ်ထပ်ကို ဖိနပ်မပါဘဲ သွားရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ လက်ထိပ်မလောက်ဌလို့ ကြိုးနဲ့ လျှော့ကွင်းထိုးပုံစံ ချီပြီး အတွဲလိုက် လျှောက်ရတဲ့ နေ့တွေဟာ တကယ်ပါပဲ အမရယ်၊ ပြောပြစရာ စကားလုံးတောင် မရှိဘူး။
လွတ်လပ်ရေး နဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကတော့..ဗမာပြည်မှာ.. ကွဲပြားနေတုန်းပါပဲလေ..။ ဆရာကြီးနေရာမှာ ၀င်ကြည့်ပြီး ဘယ်လောက် စိတ်ထိုခိုက်စရာ ကောင်းမယ်ဆိုတာ.. ခံစားနေရတယ်.
၁၉၇၇ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အမှတ်တရပါ။ အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ တိုက်သစ်ထဲမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အတွက် လူတယောက် ဘဲဥပြုတ်တလုံး ဝေပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့် နှစ်ရဲ့ 'ဘဲဥပြုတ်တလုံးတန်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့' ဖြစ်ပါကြောင၈်း။
စို့စို့နင့်နင့်ကြီး ချိုသင်းရယ် ဆရာကြီးလို အဖြစ်မျိုးနဲ့လူတွေ ဘယ်လောက် ရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်ရှိနေတယ် နောက် ဘယ်လောက်ရှိအုန်းမယ် မသိဘူး။
မြန်မာ ပြည်သူတွေ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လွတ်လပ်ရေး အမြန်ရယူနိုင်ကြပါစေ။
မလွတ်လပ် သော လွတ်လပ် ရေးနေ့ပါလား… နာကျင် လိုက်ရတာ မချိုသင်းရယ်
ဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်တာ လွတ်လပ်ခြင်း အရသာကို ဘယ်သူမဆို နှစ်သက်ကြတာ ငယ်ငယ်က အဖွား ဆုတောင်းချက်ထဲမှာ အကျဉ်းခံနေရသူများ အတွက်ဆိုပြီး ပါလေ့ရှိတာ သတိရမိတယ်
လွတ်လပ်ရေး နေ့ မှာ ဒီ အတွေး လေး ဝင် လာ ခဲ့တယ်.. ရင်မှာ ဆို့ နင့် နေတယ်...
1948-1885= 63 years (result = independent)
2010-1948= 62years (result = ?????)
ဖေဖေတို့ဆရာကြီးတို့ လိုချင်တဲ့ တကယ့်လွတ်လပ်ရေးကို ဘယ်တော့များမှ ရမလဲနော်--
အခုလို မျှော်လင့်နေရတာကိုက အရိုးသားဆုံး ၀န်ခံရရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုက ညံ့လွန်းလို့ ပါပဲ။
တယောက်က ဓားနဲ့ မို့ 
ဟိုးတခါ... ဒီကဗျာစာပိုဒ်လေးရဲ့ ရာဇဝင်ကို သိခွင့်ရခဲ့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ထိခိုက် ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာပါပဲ...
Ma Cho Thin
Your post really made me cry.
ပုံမှန်အတိုင်း အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ post လေးတခုပါပဲလို့ ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပါ။
မျက်ရည် ၀ဲ ရတယ်...။ စိတ်မကောင်းဘူး
မိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး နေခဲ့တဲ့ ချိုသင်းတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့တွေကနေ နောက်တော့.... အော်...အပျော်တွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်စေချင်ပေမယ့်လည်း... ချိုသင်းတို့လို သားသမီးတွေ မပြောပါနဲ့...ကဗျာတွေကနေ ချစ်နေခဲ့ရတဲ့ တို့တွေတောင် ဆရာကြီး အဲဒီလို ကြုံခဲ့ပါလားဆိုပြီး..စိတ်မကောင်းလွန်းလိုက်တာ...။ စစ်မှန်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ အရသာ ပြည်သူတွေ ခံစားနိုင်ပါရစေလေ..
ချိုသင်းရေ... ကြိုက်လွန်းလို့အခု ကော်မန့် နဲ့ ချီးကျူးပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်မယ်။
အဲဒီအချိန်က ကိုကိုလေး လည်းအထဲမှာပဲထင်တယ်....
မှတ်မှတ်ရရ...new year ကိုအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပဲ ကျင်းပလိုက်ရတယ် ထင်တယ်...
အလှည့်ကျစတေးခံရတဲ့ သိုးကလေးတွေလို။ =(
I'm really touched by your post.
ချိုသင်းရယ်… ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ကျမိတယ်… ရင်ထဲမှာ ဆိုနင့်သွားလိုက်တာများ… ချိုသင်းက ကာယကံရှင်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များဆို့ နင့်လိမ့်မလဲ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်…
Hoping to read ur new post Cho Thin...
Long time no see naw ....:D
Hope u and Ko KWNa are fine and ur diabetic is under control....
Ma Chit Kyi
Already read since you posted...
It's really touched...
ကောက်ညှင်းပေါင်းလေးက မွှေးနေအောင် ရေးတတ်တယ်။ ကျနော်သတိရလိုက်တာက ဆရာကြီးတင်မိုးနဲ့ ဆရာမောင်စွမ်းရည်တို့ နဲ့အတူစကားပြောရင်း။ ရေနွေးသောက်ရင်းစားခဲ့ကြသည့် ကောက်ညှင်းပေါင်းဝိုင်းလေးကို အထူးသတိတရရှိလှပါသည်။
Date : 19 Jan 2010
Attn : Mdm Moe Cho Thin
Please note that time for your new post has been over due and be reminded that your old post was more than2weeks old now.
On behalf of all fans,
မအားမှန်းလဲသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာလေးတွေကိုလဲ ဖတ်ချင်လို့်အရမ်းကို တောင့်တနေပါတယ်။ အားတဲ့ အခါလေး စာရေးပြီးတင်ပါအုံးနော်... နေ့တိုင်း ဘလော့ကိုအသစ်တင်လားဆိုပြီး ချောင်းကြည့်ရတာ မောလှပြီ။ :)
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်စိထဲပါလိုက်မြင်ယောင်ရင်းခံစားသွားပါတယ် ...